Wayyaaneen TPLF Hidhamtoota Siyaasaa Dhuguma Ni Gadhiiftii? | QEERROO
Wayyaaneen TPLF Hidhamtoota Siyaasaa Dhuguma Ni Gadhiiftii?
Gabaasa [SQ, amajji 16, 2018] Mootummaan Wayyaanee Ilmaan Oromoo maqaa ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoon hidhee jiru gadi dhiisuun akeeka isaa akka hin taane oggaa hubatamu, namoota amma dhiifama godheeraaf, gadi dhiisuufani jedhee labse keessattillee kanneen miseensummaa fi deggertummaa ABOn hidhamanii jiran keessatti akka hin argamne hubatame.
hidhamtootni 528 ol ta’an akka gadi dhiifaman kan gabaasame oggaa ta’u, isaan kunis iddoo gara garaatti hidhamanii kan jiran ta’uun hubatameera. Isaan kunis irra jireessaan uummata naannoo kibbaa keessaa yakkamanii kan hidhamanii fi kan warra Habashaa irraa ta’uun kan gabaasame oggaa ta’u, kanneen maqaa ABOn hidhaman kan keessatti hin argamne ta’uu maddeen ifa godhu.
Hidhamtoota ni gadhiifamu jedhamee himame keessaa namootni 400 ol ta’an bulchiinsa Ummatoota Kibbaa irraa ta’uunis hubatameera.
Mootummaan wayyaanee torbanoota lamaan darban keessa hidhamtoota siyaasaa kan gadhiisuu fi mana hidhaa Maikalawwii kan cufu ta’uu labsullee, booda irra ammoo ibsa kenne sharafuun waliin dhahiinsa uumuun isaa kan yaadatamuu dha.
Waliin dhahiinsa jiraachuun aadaa isaa kan ta’e mootummaan wayyaanee amma dura hidhamtoota siyaasaa nan gadhiise jedhee labsuu malee ulaagaa ittiin gadhiisu akka hin kaa’in kan yaadatamu oggaa ta’u, amma hidhamtoota gadi dhiisuuf ulaagaa arfan tokko kaa’uun isaa hubatameera.
Haala kanaan mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa’aman kanneen deggertummaa fi miseensummaa ABOn akkasumas Qeerroo Bilisummaa Oromoon yakkee manneen hidhaa biyyattii keessa jiru hunda keessatti hiraarsaa turee fi jiru gadi dhiisuun akeeka isaa akka hin taane beekuun danda’ameera.
Dhimma hiikamuu hidhamtoota Siyaasaa irratti:
Hayilamaariyaam Dassaaleny hidhamtoota siyaasaa nan hiika jechuu erga dhaga’amee booda
1) Hidhmatoota Murtiin du’aa itti kenname 15
2) Hidhamtoota murtiin umrii guutuu itti kenname 102
3) Hidhamtoota waggaa 1-25 tti itti murteeffame 500 ol
4) Hidhamtoota dhimmi isaanii dhaddacha 4ffaa fi 19ffaatti ilaalamaa jiru 915
Walumatti sadarkaa Federaalaa qofatti hidhamtoota 1532 mana hidhaa wayyaanee akka jiran hubachuun danda’ameera.
Akkasumallee namoonni haga ammaa mana hiraarsaa wayyaanee sana keessaa butamanii achi buuteen isaanii dhabaman namoonni 37 akka balleeffaman hubatameera. Warreen kanaafis ibsi akka laatamuufi eessa buuteen isaanii akka himamu gaafatamaa turus deebiin argamuu hin dandeenye.
Haa ta’u malee, Abbaan Alangaa Federaalaa ibsa guyyaa kaleessaa kenneen ulaagaa hidhamtootni kun itti hiikaman hunda cufuun namootni murtaa’an qofti akka hiikaman ibsee jira. Himatamtoota 538 himatni isaanii addaan citu keessaa 413 naannoo Kibbaa irraa, 115 qofti ammoo Federaala irraa ta’uu ibseera. Walumaagala hidhamtoonni carraa hiikamuu argatan kan Heera biyyaa yookiin Bulchiisa isaa diiguuf hin sochoone, Bu’uuraalee dinagdee biyyattii irratti miidhaa kan hin qaqqabsiifnee fi lubbuu namaa kan hin baasne qofa jechuun ibseera.
Kanaaf abdiin hidhamtootni siyaasaa hiikamuu fi jijjiiramni barbaachisaa ta’e dhufuu akkasumas waliigalteen sadarkaa biyyaatti akka dhufuuf akeekame guutummaa guutuutti gufatee jira jechuun ni danda’ama. Ummanni keenya qabsoo isaa tokkummaa fi murannoon eegale bilisummaan goolabee hidhamtoota isaa harka diinaatii baafachuun barbaachisaa ta’uu gamanumaan maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin dhaamsa dabarsina.